Alahady – 25/01/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ny tarehy ratsy tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy azo ovaina.
Izany no lohahevitra aroso hodinihintsika anio, tao Galilea no toerana nanombohan’I Jesoa ny raharahany, ary nanambaràny voalohany tamin’ny olona hoe: “Mibebaha ary minoa ny Vaovao Mahafaly”.
Inona no tian’I Tompo holazaina amin’ny hoe “Mibebaha” ?
Raha asian-teny ny tamin’ny andron’I Jesoa , rehefa hibebaka ny olona dia manao sorona biby, ka halatsa-drà ao Tempoly izany. Dia noheverina fa voadion’iny ny fahotàna rehetra. Amin’izao androtsika izao indray, sodokan’ny seho amin’ny endrika ivelany isika. Heverintsika noho izany fa ny atao hoe mibebaka dia manaraka ny fombafomban’ny fiangonana isan-karazany. Izany hoe fiovàna amin’ny endrika ivelany matetika no handraisantsika ny atao hoe “Fibebahana”.
Amin’Andriamanitra anefa, fiovam-po sy fiovan-tsaina mankany amin’ny tsara araka ny teniny no atao hoe mibebaka. Ny fihetsika ety ivelany izany dia taratry ny avy ao anaty ihany.
Tsara ny manamarika fa roanjato (200) taona talohan’I Jesoa Kristy dia efa notoriana izany fibebahana izany raha hiverenantsika ny tantara tao amin’ny Bokin’I Jonasa mpaminany. Mirakitra fiovàna sy fahafoizana ny tantara niseho tao Niniva, tana-dehibe iray. Nirahin’Andriamanitra I Jonasa tamin’izany hitarika ny mponina tao Niniva hibebaka. Noho ny hasatotana sy halaviran’ny lalana mankany anefa dia tsy naharisika i Jonasa, satria hateloana vao tonga any. Noho izany, nihova lalana ity farany nandeha sambo. Rehefa teny ambony sambo dia nanonja be ny ranomasina ka noheverin’ny olona fa ho ny fisiany no nahatonga izany ary dia natsipin’izy ireo tany an-dranomasina I Jonasa ka natelin’ny trozona. Kinanjo afaka hateloana dia naloan’ilay trozona teny amoron-dranomasin’I Niniva ihany I Jonasa. Nitatitra ny hafatr’Andriamanitra ihany izy fa nataony fohy sy tsotra izany: “Afaka efapolo (40) andro dia horavana I Niniva” hoy izy. Io tenin’I Jonasa in-draim-bava io fotsiny dia nanaitra ny mponin’I Niniva ka nitarika azy ireo hifady hanina sy hibebaka, ny mpanjaka aza moa nitafy lasaka sy nihosotra lavenona mihitsy. Rehafa nahita izany Andriamanitra dia nanenina ny saika hoataony an’I Niniva. Izany teny kely izany no nahavita nanova ireto mponina .
Fa sao miandry ny toy izany ihany koa àry isika?
Tsara hofantatsika anefa fa tsy misy hahalala izany fihaviana izany isika . Antony lehibe iray tokony hiambenana sy hibebahana izany , ary hinoana ny Evanjely ihany koa. Mazava ho azy fa hatsahatra hatreo ny toe-tsaina sy toe-po ratsy raha te hibebaka.
Ny fitorian’I Jesoa ny Vaovao Mahafaly moa dia mila olona hatrany, ka I André sy I Simôna Piera no nantsoiny voalohany tamin’izany. Inona no antony? Satria mpanjono sy mpanarato no asan’izy ireto, asa sarotra, mila faharetana sy herin-tsaina ihany koa, ka mifandraika amin’izany ny asa hampandraiketan’I Jesoa azy ireo. Olona zatra mihafy, mahazaka ny onjan’ny ranomassina no nilain’I Jesoa mantsy. Hoy Jesoa tamin’izy ireo: “ Avia hanaraka Ahy fa hataoko mpanarato olona ianareo” . Ny asa izany eto tsy miova fa ny haratoina no miova : olona. Mora anefa ny manarato trondro noho ny manarato olona . Iaraha-mahalala fa ny olombelona samy manana ny sainy sy ny safidiny.
Nilaozan’izy ireto ny haratony, ary nanaraka an’I Jesoa izy roalahy.Dia toy izany ihany koa no niseho rehefa nifanena tamin’I Jakôba zanaky Zebede sy I Joany rahalahiny I Jesoa, mpanarato ihany izy ireo. Dia nanaiky nanaraka an’I Jesoa ireto farany, I Jesoa izay tsy fantany akory. Nafoy ny asa, nilaozana ny fianankaviana, navela ny ray amn-dreny sy ny fianakaviana.
Toy izany ny fanarahana an’I Jesoa, tsy afaka mifikitra amin-javatra anankiray ianao. Raha voafatopatotra tsy afaka ny hanara-dia an’I Jesoa. Mila fantarintsika izany hoe inona avy ireo mangeja antsika tsy hahafahantsika manara-dia an’Andriamanitra. Mila manapaka ireo geja ireo isika raha tsy hilaza afa-tsy ny loka, ny halatra ary ireo toetra ratsy isan-karazany.
Torohevitra no aroso ho antsika anio: rehefa mitady hanimba ny fianam-panahy dia tsara raha ajanona. Afoizony zavatra rehetra ary manaraha an’Andriamanitra fa hovonjena ny fanahinao ary tsy hanenina ianao. Mibebaha na dia sarotra aza ny miala amin’ny mahazatra ka manaraha ny dian’ireto mpanarato.
Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Toriteny
Alahady – 21/09/2014 – Toriteny